Nzira yekufambisa tsvakurudzo yakakosha sei muAmazon?
Keyword research is an integral part of Amazon optimization campaign that should be done at the initial stage of your product launch on Amazon. Izvi zvinosanganisira kutsvaga zvose zvinodiwa uye zvakakwirira-kutsvaga mazwi ekutsvaga anogona kukusimbisa kutengesa kwako. Zvakakosha kusarudza zvose zvakakodzera mazita maviri maviri ayo ayo vatengi vangakashandisa kuwana zvigadzirwa zvako kana zvinhu zvakabatana. Icho chinhu chinoita kuti kubudirire sezvo kukosha kwechigadzirwa kumubvunzo wekutsvaga kwevashandi kuchagadziriswa nekuenderana kwemashoko ekutsvaga anobva pane zvakanyorwa. Kana iwe wakakanganwa kana imwe yatsvaga yekutsvaga izwi, ipapo mikana yako yekuonekwa mumigumisiro yekutsvaga imwe yemibvunzo yevashandi ichaderedza. Kuti urege kushayikwa kunze kwekutengesa iwe unoda kuongorora Amazon kutsvaga maitiro uye uite runyoro rwemashoko anotsvaga kutsvaga. Muchikamu chino, tichakurukura nzira dzingaita sei kuburikidza neAmerica keyword kutsvakurudza sepro pro. Zvose izvi mazano anobva pane zvakaitika kwatiri. Saka, tinogona kuzviti iwo anoshanda uye anoshanda.
Mazano uye zvishandiso zvichakubatsira kuti uite hurumende yeAmerica tsvakurudzo
Chiitiko cheunhu pachako
iyo inonyanya kutsvaga mazwi ekutsvaga kuAmazambique ndeyokuti uzviise iwe mumashambadzi evanhu vako. Ndicho chikonzero chekutanga tsvakurudzo yako yekutsvaga nekufunga nezvemashoko ako angangodaro vatengi vangashandisa kuwana zvinhu zvako. Iwe unofanirwa kufungisisa zvinhu zvakadai sekuda kutenga zvigadzirwa zvako, rudzi rwemibvunzo yavangave nayo, uye rudzi rwezvinhu zvavanokwanisa kutenga panzvimbo yezvibereko zvako.
Unganidza mashoko ose okutsvaga achauya mupfungwa uye uone ivo kuburikidza nevanoshandisa mitambo yekutarisana nevanhu kuti vaone kuti vanhu vari kutaura nezveizvi. Ichakubatsira iwe kuti uite zvimwe zvigadziridzo zvekutsvaga kwako nekunyora. Pano iwe uchakwanisa kuwana mamwe maonesheni, mazita, uye kushandiswa kunowanzoshandiswa munharaunda.
Inoshanda zvakanaka chaizvo. Iwe unongoda kutora tsamba shomanana mubhokisi rekutsvaga uye zvigadzirwa zvichangoerekana zvaonekwa semazano. Ichi chizere chekuita hazvizokupi kukupa zvakakwana deta yakarurama nekuti inoratidza mazwi ekutsvaga akawanda. Zvisinei, iwe unogona kuva nechokwadi chokuti iwe uchazoiswa nemashoko anotsvaga okutsvaga anogona kubatanidzwa mune zvawakagadzirwa.
Unofanirwa kunyatsotsanangura uye kushivirira kushandisa izvi zvakazara basa. Iwe unofanirwa kutevera zita rechigadzirwa chako neye mavara ezvinyorwa zvinyorwa uye ona izvo zvinosvika. Iwe unofanirwa kuwana mazwi akakodzera uye akasimba ekutsvaga ayo anonyanya kufanana nezvinhu zvaunotengesa. Uyezve, zvikamu zvinoratidzika zvinogona kukubatsira kuti uwane mamwe mapoka kutarisa zvigadzirwa zvako.
Zvinoreva kuti iwe haufaniri kusanganisira kwete chete mabhuku ekutsvakurudza ekutsvaga kwako asiwo akafananidza nguva yakareba-misi mikuru iyo inowedzera mikana yako yekutsvaga mikana yako yevatengi. Zvisinei, iwe unofanirwa kuzviita chete munyaya kana iwe une imwe nzvimbo yakawanda yemashoko makuru. Nzira yako yepamusoro inofanira kuva yekuvhara mazwi ekutsvaga anotsanangura chigadzirwa chako.
Kana iwe uchida kutsvaga mazwi ekutsvaga akakodzera kupfuura usapedza nguva yakawandisa nekuedza, iwe unogona kungoita competitive analysis. Iri ndiro shoko guru rinofuridzirwa rinogona kuregererwa. Tsvaga mashoko aya mumakwikwi emiti yemakwikwi, mabhota, uye tsanangudzo. Pano unogona kuwana mazwi anokosha ausina kufunga nezvazvo. Iva nechokwadi chekuti chigadzirwa chinoshandiswa chinowanikwa mubhuku (f. e. nekuti ganda rine mafuta; paganda rakaoma; nekuda kwevakadzi, nezvimwewo. )
Ndinogara ndichitaura kuti simba iri rinonyatsoratidzirwa zvakakodzera. Ichi chigoni hachibatsiri chete kune vadzidzisi vemitauro asiwo maAmerica vatengesi. Inonyanya kubatsira kana iri kuuya kune zvigadzirwa zvinogona kunge zvine zita rimwe chete, kana zvinogona kushandiswa mumamiriro ezvinhu akasiyana. Thesaurus inogona kukupa mavara akasiyana-siyana emashoko uye mazwi.
Uchishandisa chigadziro chekutsvakurudza kwemashoko makuru, iwe unofanira kuchengeta mupfungwa pfungwa dzinotevera:
shandisa zvakawanda uye mamwe mazita emashoko;
tsvaga mazwi anotsanangura chinhu chaunotengesa;
usakanganwa kugadzira zvinyorwa zvinowanikwa;
usaedza kuwana imomo mazita echiratidzo.
Zvose zvakataurwa kare mazwi ekutsvakurudza mashoko echinyorwa zvinogona kubudirira kana une ine mhando imwe chete yemuchina uye zvakawanda nguva yakasununguka. Zvisinei, vanogona kukupa nemigumisiro yakafanana sey keyword research tools. Kana uine zvakawanda zvekutengesa mumhinduro yako uye unoda kuwedzera kutengesa kwako, nyanzvi Amazon search software ichave yakakosha zvikuru yebhizimisi rako.
chikuru pane zvigadzirwa zvitsva. Zvinoreva kuti data yakawanda yekutsvaga muGoogle ichafanana neAmazon. Kushandisa iyi shanduro, unogona kuwana pfungwa yevangangodaro vatengi vari kutsvaga uye kuwana mitsva yekutsvaga yekutsvaga ma Amazon yako kubhadhara-per-click campaign. Ichi chishandiso chakasununguka kushandisa uye chinokwanisa kukupa iwe data yakanyatsonaka pane webhu. Kushandisa GKP, iwe uchakwanisa kuongorora ivhu rekutsvaga raunotsvaga kutsvaga mazwi uyewo kuongororai makwikwi emakwikwi ako. Zvisinei, iwe unofanirwa kuva wakagadzirira kuti data yeGKP inogona kunge yakasiyana zvakanyanya kuAmazon, saka iwe uchada kuigadzirisa.
Saka, Google Keyword Planner inonyengera asi inogona kuva yakaoma kushandisa. Uyezve, inoda compte yeAdWords. SEMRush
SEMRush inyanzvi yekutsvakurudza izwi rinokosha richakubatsira kuwana miswe mirefu tsvaga mazwi ekutsvaga kubva kune vazhinji vanoongorora nekutsvakurudza. Necho chikwata, unokwanisa kutsvaga makwikwi ako uye ona kuti ndezvipi mazwi ekutsvaga anovaunza iyo inonyanya kufamba. Chinhu chakanakisisa chazvo ndechekuti inogona kuratidza mazwi ako ezvinyorwa zvikwereti Source .